I-Raw DMAA powder (13803-74-2) Abavelisi - Phcoker Chemical
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2)
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) i powder i .......
Amandla: 12400kg / inyanga
SKU: 13803-74-2 Udidi: Ukuhla ukusinda
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2) ividiyo
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2) Iinkcukacha
Igama lemveliso I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA)
Igama leKhemikhali I-4-methylhexan-2-amine, iDMAA, i-Dimethylamylamine, i-1, i-3-DMAA, i-Geranamine, i-Methylhexaneamine, i- 3-Dimethylpentylamine, i-Forthane
uhlobo Numama Ifane, iGeranamine
Iqela leziyobisi Ukutya okuncedisayo
Inani leCAS 13803-74-2
I molecular Fi-ormula C7H18ClN
I molecular WSibhozo 151.67752
IMasaisotopic Mass 115.136 g / mol
Ukuxuba Point 120-130 ° C
Fukuhlaziywa kwakhona Point Akukho mhla okhoyo
I-Biological Half-Life I-DMAA ine-half-life of 8.4 iiyure xa kuthelekiswa neeyure ze-5.4 ze-caffeine, kunye nexesha lexesha lama-0.14 iiyure kunye neeyure ze-0.37 ze-caffeine.
umbala Umhlophe ukuya kutsho-omhlophe
Sukufaneleka Emanzini, 1.5X10 + 4 mg / L kwi-25 deg C (est)
Aukuguquka Njengomrhumo okhuthaza okanye okhuthaza amandla okutya
ekrwada I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2) Inkcazelo
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) i powder iyimveliso ye-amphetamine eye ithengiswa kwimidlalo yezemidlalo kunye nemveliso yokulahlekelwa kwindleko, ezininzi zazo ezithengiswa njengezongezelelo zokutya. Njengenkqubo ye-nervous central (CNS) enamandla kakhulu, i-DMAA iphakamisa amanqanaba ombane afana necaffeine, kodwa isebenza ngendlela ehlukileyo. Nangona iindlela ezichanekileyo apho iDMAA yokwandisa amandla engekho i-100% ethile, abaninzi abaphandi bayavuma ukuba i-DMAA ivuselela i-noradrenaline (norepinephrine) ukukhululwa kwingqondo.
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (i-DMAA) yaziwa nangokuthi i-methylhexanamine okanye i-geranium extract, nangona kunjalo, i-FDA ayikwazi nayiphi na isayensi ethembekileyo ebonisa ukuba i-DMAA ikhona ngokwemvelo kwizityalo. Nangona i-DMAA ngexesha elinye livunyiwe njengesiza solawulo lwe-decongestion ye-nasal, ayisasayi kuvunyelwa le ntsebenzo kwaye akukho tyenziswa kwonyango lwe-DMAA powder eyaziwayo namhlanje. I-DMAA, ngokukodwa ngokubambisana nezinye izithako ezikhuthazayo ezifana ne-caffeine, ingaba ngumngcipheko wempilo kubathengi. Ukuthatha i-DMAA ipowder inokuphakamisa uxinzelelo lwegazi kwaye iholele kwiingxaki zentliziyo ezibangelwa ukuphefumla okufutshane kunye nokuqiniswa esifubeni ekuhlaselweni kwentliziyo.
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2) Indlela yokusebenza
Izifundo ze-Physiology ze-DMAA powder kwi-1940 kunye ne-1950 zibonise imiphumo ye-physiological sympathomimetic eyenza isenzo se-epinephrin kunye ne-peripheral sympathetic neuron ne-central system ye-nervous effects. Ezi ziquka ukunyuka kwengcinezelo yegazi ngenxa yokunyanzeliswa kwemithambo yegazi, ukunyuka kwenani lentliziyo ngenxa yokuvuselela inhliziyo kunye nokwanda kweeshukela zegazi.
I-Vasoconstriction - imithambo yegazi kwimpumlo yayiya kunqanda ukwenzela ukuba ukuhamba kwegazi okungaphantsi kwakukhokelela ekukhutshweni komzimba. Le yindlela eyenziwa yi-OTC efana ne-nasal sprays njenge-oxymetazoline (Afrin) kwaye ngokwenene iyasebenza. Nangona kunjalo, u-Forthane wabuya ehoxiswa kwimarike ngenxa yemiphumo ebalulekileyo yezinto ezibandakanya intloko, ukugubha, nokunyuka kwengcinezelo yegazi. Le miphumo kungenzeka ukuba i-DMAA ihlelwe ngendlela efanayo ne-amphetamine kwaye ngenxa yoko, i-compound ayikho nje i-agent ye-vasoconstricting kodwa iyinkqubo yesistim ephakathi (CNS) evuselelayo.
benefits I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2)
I-DMAA inceda ekuphuculeni imemori yesikhashana kunye nesenzo se-reflex
I-DMAA inceda ukutshisa amafutha
I-DMAA ivuselela amandla
I-DMAA inokuphucula ukusebenza komzimba
I-DMAA ithuthukisa iingqondo kunye nokwanda kwinjongo
I-DMAA iphucula imvakalelo kunye nevakalelo jikelele
I-DMAA ikwandisa ikhono lokuqonda
I-DMAA yokwandisa amandla, ukugxininiswa kwongeziweyo kunye nokukhuthaza
kucetyiswa I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2)
I-dose ephakanyisiweyo ye-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (i-DMAA) kwi-10-20mg ububanzi kwaye ekugqibeleni ifinyelela ku-40-60mg ngosuku, akukho bungqina boqobo bokuxhasa olu luhlu lwezilingo kodwa kubonakala ngathi lilinganiso ukuxhaswa kwe1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) kwimarike. Kukho iindlela zokusebenzisa:
25mg kunye ne-25mg 30min emva kwesaziso sokuqala
50mg isisu esingenalutho
50mg DMAA powder eluhlaza kunye neNdebe yeKhafi engenanto isisu.
Xa usebenzisa iindlela zokuqala neyesibini, awukwazi ukuva utshintsho kuba ugxininiso luncinci.
Xa usebenzisa indlela yesithathu neyesine, i-DMAA powder iya kukunika ingqwalasela enkulu kunye nokugxininisa kwaye iphakamisa indlela ovakalelwa ngayo. Iimvakalelo zakho ziya kuba zikhulu. Ewe, indlela yesine ingaba ngcono kuba iya kusebenza ngakumbi.
Enye indlela kukuthatha i-25mg ye-DMAA powder iiyure ezimbini emva kokuthatha i-50mg. Oko kuya kuba yindlela embi, kuya kukukwenza uzive unesiqhelo sokusasazeka kwaye ufumane intloko encinci. Abanye abasebenzisi abanolwazi bathi i-DMAA dose ayifanele idlule i-75mg kwixesha le-24, kwaye kungcono ukungathathi i-75mg ngosuku olunye.
Imiphumela I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2)
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (i-DMAA) i powder ingaba yingozi xa ithathwa ngomlomo. Ekubeni kucatshangelwa ukuba isebenze njengento evuselelayo, kukho inkxalabo yokuba inokunyusa amathuba okuba nemiphumo emibi efana nale:
Ixabiso lentliziyo kunye negazi
Ukusebenzisana neziyobisi kakubi.
Intliziyo engavumelekanga (intliziyo ye-arrhythmia)
I-Raw Synephrine Tartrate powder (16589-24-5)
I-Raw Synephrine Tartrate powder; 1- (4-hydroxyphenyl) -2- (methylamino) ethanol tartrate Iinkcukacha ezifanayo 1- (4-hydroxyphenyl) ...... ..
Amandla: 1358kg / inyanga
I-powder Orlistat ebomvu iyisisetyenziswa esisetyenziswa kunyango lokunyanya. Umsebenzi walo oyintloko ukhusela ukuxutywa kwamafutha ekudleni kwabantu ....
I-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5)
Amandla: 1280kg / inyanga
I-powder Raw Synephrine HCL (5985-28-4)
I-Synephrine i-HCL powder yi-alkaloid yemveliso yamakhemikhali eyenziwa ngokwemvelo ifunyenwe izityalo kwaye ikhutshwe ukuze isetyenziswe njengencediso ......
Amandla: 1450kg / inyanga